Iindaba - Iindidi zoMxube wokuhlamba
Kukho umahluko omkhulu phakathi kwe- isepha yamanzi ngokusebenza kakuhle kunye nefolokhwe yokuhlamba kunye nokusebenza kakubi. Kwimpompo yeshawa esebenzayo, ukusebenza kwayo kokonga amanzi kulungile kakhulu, kwaye nokuba ivuliwe kwaye icinyiwe amaxesha ayi-100000, ayizukuvuza, enokugcina amanzi amaninzi. Ke kungcono ukhethe itompu yeshawari yanamhlanje yobuchwephesha.
Ukudiliza ishawa, sinokuqonda okungalunganga kwezinto zayo ezahlukeneyo. Nokuba yeyiphi na indawo ebalulekileyoishawaUmsebenzi obaluleke kakhulu kwaye obalulekileyo weshawa ulawulwa ngumzimba ophambili wompompo.Ishawa eqhelekileyo kusapho ihlala ineendlela ezahlukeneyo zokuphuma kwamanzi. Ngaphandle kolawulo lomzimba ophambili wetompu, akunakwenzeka ukuba ufumane indawo yokuphuma kwamanzi kwaye utshintshe iindlela ezahlukeneyo zokuphuma kwamanzi. Kubaluleke kakhulu ukuba ukhethe umzimba okhokelayo ngezinto eziqinileyo kunye netekhnoloji ephezulu.
Shower faucet iCartridge wahlukile, umsebenzi wahlukile, kukho iintlobo ezintathu zetephu iCartridge Kwimarike, ziyi-ceramic disc valve core, i-valve yensimbi engenasici kunye ne-valve yohlobo lwe-valve, phakathi kwexabiso lentengo ye-ceramic disc valve isezantsi, ungcoliseko lincinci, kodwa kulula ukuphula; i-valve yentsimbi engenasici, enomxholo wobuchwephesha, unokulawula ngokuchanekileyo ubushushu bamanzi, ungonga amandla kunye namanzi; Uhlobo lwe-roll spool, kulula ukuyisebenza, ngakumbi ukujikeleza ngokutyibilikayo, kodwa ikwanempawu zokuguga kunye nokunxiba ukumelana.
Ubushushu obuzenzekelayo obuqhubekayo ishawa’s Ukuxuba ivalve inomsebenzi wobushushu bamanzi rhoqo. Emva kobushushu bamanzi obekiweyo ngokweemfuno zokwenyani, ubushushu bamanzi okuphuma bunokufikelela ngokukhawuleza kwaye buhlale buhleli, obungachaphazelekiyo kukutshintshwa koxinzelelo lwamanzi abandayo kunye nobushushu bamanzi ashushu, ubushushu okanye ukuphuma kwamanzi, ukuze kusonjululwe ingxaki yokubanda ngesiquphe kunye nobushushu bamanzi ashushu kwinkqubo yokuhlamba. Xa uxinzelelo lokungena, ubushushu okanye ukuphuma kwamanzi kubanda kunye nokutshintsha kwamanzi ashushu, utshintsho lobushushu ngaphakathi lungaphakathi± 2 ℃.Ngaphezu koko, i-valve yokuxuba amanzi ye-thermostatic inemisebenzi yokuthintela ukukhwela kunye nokothuka kubanda. Kwinkqubo yokuhlamba, xa amanzi abandayo ephazanyiswa ngequbuliso, i-valve yokuxuba amanzi ye-thermostatic inokuwavala ngokuzenzekelayo amanzi ashushu kwimizuzwana embalwa, edlala indima yokhuselo lokhuseleko ngokuchasene ne-scalding; xa amanzi ashushu ephazanyiswa ngesiquphe, ityhubhu yokuxuba amanzi ye-thermostatic inokuwavala ngokuzenzekelayo amanzi abandayo kwimizuzwana embalwa, edlala indima yokukhusela ukhuseleko kukothuka okubandayo.
Khetha okulungileyo intloko yeshawa, sisiqalo seshawa entle, khetha efanelekileyo ngokufanelekileyo kwintloko yabo yeshawari esemgangathweni.